आकाशीय योजना: यो के हो, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र यसलाई कसरी बनाउने नेटवर्क मौसम विज्ञान
आकाश अवलोकन गर्न प्रयोग गरिने उपकरणहरूको समूह भित्र हामीसँग छ आकाशीय योजना। यो आकाशीय प्लेन को नामबाट पनि परिचित छ र यो गणितको उपकरण भन्दा अरु केही छैन जुन क्षितिज भन्दा माथि आकाशलाई जान्छ। यसले अन्य अवलोकन उपकरणहरु लाई दिन्छ कि तपाई कुनै पनि समय र वर्षको कुनै पनि दिनमा क्षितिज अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। । यसको पूर्ववर्ती हो astrolabe, र यो जस्तै, आकाशीय योजना को एक विशिष्ट अक्षांश को लागी डिजाइन गरीएको छ।
यो लेखमा हामी तपाईलाई आकाशीय योजनाको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँदछौं, कसरी प्रयोग हुन्छ र यो के हो भनेर।
1 आकाशीय योजना के हो?
2 कसरी आकाशीय योजनाहरू काम गर्दछ
3 यो कसरी बनेको छ
4 यो कसरी प्रयोग भएको छ
आकाशीय योजना के हो?
जब हामी आकाशीय योजना वा गणित उपकरणको प्रकारको बारेमा कुरा गर्छौं क्षितिज मा आकाश जान्न सेवा गर्दछ। आकाश हेराईका लागि अन्य उपकरणहरूमा प्रदान गर्ने लाभ यो हो कि हामी यसलाई वर्षको कुनै पनि समय र दिनमा देख्न सक्दछौं। यो उपकरण विशिष्ट अक्षांशबाट आकाश अवलोकन गर्न डिजाइन गरिएको हो। यस अवस्थामा, योजनाबद्ध क्षेत्र degrees 37 डिग्री उत्तरमा छ र यो धेरै टाढाको दृष्टिकोणको साथ अर्को उत्तरी स्थानको लागि उपयुक्त हुँदैन। दक्षिणी गोलार्धमा प्रयोग भयो भने यो बेकार हुनेछ भनेर अझ बढी केहि छैन।
यसको सुधारको डिग्री above 37 डिग्री उत्तर भित्र वा तल डिग्री हो। त्यो हो, यो पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ अन्डालुसिया, सेउटा, मेलिल्ला र अन्य सीमावर्ती क्षेत्रका साथै विश्वको कुनै पनि शहर समान अक्षांशको साथ। आकाशीय योजनामा ​​दुई सपाट र गोलाकार डिस्कहरू हुन्छन् जसका केन्द्रहरू समान अक्षमा पिभट हुन्छन्। यस इन्स्ट्रुमेन्टको आधार तारा चार्ट हो जुन आकाशमा अवलोकन गर्न सकिने सबै नक्षत्र र ताराहरू स indicates्केत गर्दछ। यसले तपाईंलाई उत्तरी आकाशीय ध्रुवमा एक गिरावट वा कोणीय दूरीमा प्रदान गर्दछ। यो गिरावट योजनाकारको चासो जान्नलाई अवलोकन गर्न सकिन्छ।
यो विमानमा गोलाकार खण्ड छ र सँधै विकृतिहरूलाई मानिन्छ। आकाशीय योजनाको लागि हामीले यो प्रोजेक्शन छनौट गर्‍यौं जुन कोणीय दूरीलाई कायम राख्दछ यदि तथ्या somewhat्क केही हदसम्म बढी निर्देशित भए पनि। यो बनाइएको अन्य डिस्क अपारदर्शी हुन्छ सानो पारदर्शी विन्डो बाहेक जुन क्षितिजको माथि आकाशलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। विन्डोको धार आकाशको क्षितिज हो र जहाँ छ हामी कार्डिनल पोइन्टहरू फेला पार्न सक्छौं। उत्तर र दक्षिण बिन्दुहरू विपरित छन् र विन्डोलाई दुई बराबर भागमा विभाजन गर्नुहोस्। यद्यपि, प्रक्षेपण प्रणालीले पूर्वी र पश्चिम कार्डिनल पोइन्टहरूलाई समकक्षीको रूपमा राख्दैन।
कसरी आकाशीय योजनाहरू काम गर्दछ
आकाशीय योजना को उपयोग गर्नका लागि हामीले कालो पृष्ठभूमि चार्ट प्रयोग गर्नु पर्छ। आकाशमा सबैभन्दा चम्किलो तारा जुन यो अक्षांशमा देख्न सकिन्छ यस चार्टमा प्रतिनिधित्व गर्दछ। ताराहरूको केही नामहरू गुलाबी रंगमा प्रस्तुत गरिन्छ मिल्की वे यो बैंगनी, रातो नक्षत्र रेखा र ओचरमा नक्षत्रहरूको नाम प्रस्तुत छ। अन्य रंगहरू जुन हामी कालो पृष्ठभूमि चार्टमा छुट्याउन सक्छौं भूमध्यरेखा समन्वय प्रणाली हो जुन गाढा निलो र colorमा, आकाशीय भूमध्यरेखामा आकाशीय र color्गमा र पहेंलो रंगमा इक्लिप्टिक हुन्छ। ग्रहण तारा बीचको सूर्य हो।
धेरै व्यक्तिहरू सोच्दछन् किन कि योजनाबद्ध क्षेत्र केवल 37 XNUMX डिग्री उत्तर अक्षांशमा मात्र काम गर्दछ। यो कारणले हो यो अक्षांश अन्डालिसिया शहरहरूको औसत हो र सबै योजनाकारहरू हाम्रो अक्षांशबाट मनन गर्दैन, यो अधिक अनुकूलित योजनाबद्ध विकास गरिएको छ। यो Andalusia मा सिर्जना भएको थियो र यसैले यो अक्षांश।
यो कसरी बनेको छ
तपाईं एक सरल तरिकामा आकाशीय योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। यो एक कटआउट भन्दा बढि केहि होइन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो निश्चित गुणको साथ प्रिन्ट गर्नु हो र क्यान्सरले कागजातहरू काट्ने राम्रो सीप हो। हामी सामान्य आकारको पानामा स्टार चार्ट प्रिन्ट गर्न सक्दछौं। यसलाई सेतो कार्डबोर्ड वा फोटो कागजमा गर्न सल्लाह दिइन्छ ताकि यसको प्रयोगमा यसको उच्च गुण होस्। पछि, हामी अगाडि र पछाडिको भागहरू तर हल्का र colored्गीन कार्डबोर्डको साथ मुद्रण गर्नेछौं। त्यसोभए हामी छविहरूका किनारहरूलाई थुप्रै टुक्रा टुक्रा गर्न सक्छौं। यहाँ हामी अगाडि अनुहारको विन्डो समावेश गर्दछौं जसले हामीलाई आकाशमा औंल्याउँछ।
अब, हामी अगाडी अनुहारमा खैरो eyelashes मोटाउँछौं र हामी खरानी क्षेत्रको माध्यम बाट गोंद प्रवेश गर्नेछौं। हामी अगाडि र पछाडिका टुक्राहरू गोंद गर्नेछौं र हामी छापिएको अनुहारहरू बाहिरपट्टि छोड्नेछौं। एकपटक हामीले यी सबै चरणहरू समाप्त गरेपछि हामी हेर्नेछौं कि हामीसँग एक किसिमको ईन्फाफा छ। माथिको खाली हो र यसमा हामी विन्डोको अनुहारमा छापिएको छेउको साथ काट आउट गोलाकार पत्र परिचय गर्नेछौं।
एकपटक हामीले हाम्रो आकाशीय योजनाको निर्माणको तयारी समाप्त गरिसकेपछि, हामीले यसलाई समयको साथ प्रयोग गर्न सिक्नुपर्दछ। पहिले यो हामीलाई अधिक खर्च लाग्न सक्छ, तर त्यसपछि हामी यसलाई सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्छौं।
यो कसरी प्रयोग भएको छ
हामीले तपाईंको आफ्नो आकाशीय योजना बनाउने तरीकालाई सूचित गरेका छौं, हामी तपाईंलाई यो कसरी प्रयोग गर्ने भनेर देखाउने छौं। स्टार चार्टको किनारमा हामी मुद्रित चाहन्छौं हामी बर्षका दिनहरू र महिनाहरू राख्छौं। अगाडी अनुहारको अर्धवृत्तान्तमा घण्टा पछि हुन्छ दिउँसो १ hours घण्टा बिहान 18 ० घण्टा सम्म। क्षेत्रहरू स्थानीय समय हो र आधिकारिक घन्टाहरू होइनन्। यसको मतलब यो हो कि प्रत्येक इलाकाको सौर्य समय हामी कहाँ छौं भौगोलिक निर्देशांकमा निर्भर गर्दछ। हामी आउँदो आधिकारिक समयबाट दुई घण्टा लिन सक्दछौं यदि हामी गर्मीको समयमा र एक घण्टा यदि हामी जाडोमा छौं।
यदि तपाइँ अर्को देशमा हुनुहुन्छ तर समान अक्षांशको साथ, तपाइँ केवल यसको आधिकारिक घण्टा र यसको स्थानीय समय बीचको भिन्नता थाहा पाउनुपर्दछ। यस तरिकाबाट, तपाईं उही आकाशीय योजनाकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को, तपाईंले उत्तर हेर्नु पर्छ र तपाईंले याद गर्नुपर्दछ कि पोल तारा तारा चार्टको बीचमा अवस्थित छ। सम्पूर्ण प्लानिस्फेयर घुमाउनुहोस् ताकि विन्डोको उत्तरी क्षितिजको साथ मेल खान्छ। विन्डोज सँधै क्षितिज भन्दा माथि हुनुपर्दछ किनकि यसले आकाशलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र ताराहरूबाट कसैले पनि भुइँमा हेरेको छैन। तपाईंले एउटै स्थानबाट चार्टमा चम्कने ती आकाशका चम्किला तारा बीच समानताहरू हेर्नुपर्नेछ। यो तपाईं कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, अलि अलि गरेर, विभिन्न ताराहरू र नक्षत्रहरू पहिचान गर्नुहोस्।
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाईले आकाशीय योजना के हो र यो कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने बारे अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » आकाशीय योजना
संसारमा सबैभन्दा प्रदूषणकारी देशहरू
एक माइक्रोस्कोपको अंशहरू